နမူနာအနေနဲ့ ဂျပန်စာကနေ အင်္ဂလိပ်စာကို ဘာသာပြန်ပြပါ့မယ်...
Google Translate app ထဲကို ဝင်ပြီး Japanese ရဲ့ ညာဘက်က အောက်ကိုပြနေတဲ့ မြှားကို တို့ထိလိုက်ပါ...
ဂျပန်ဘာသာစကားကို Offline ဘာသာပြန်တာနဲ့ Instant ဘာသာပြန်တာတွေ လုပ်နိုင်ဖို့ Japanese ရဲ့ ညာဘက်က download ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး download လုပ်ပါ... Offline/Instant ဘာသာပြန်တာ မသုံးရင်တော့ download လုပ်စရာ မလိုပါဘူး... မြန်မာစာအတွက်ကတော့ Offline/Instant ဘာသာပြန်တာ မရသေးပါဘူး...
back key နဲ့ အပြင်ကိုပြန်ထွက်ပါ... Google Translate app စဝင် ဝင်ခြင်းပုံအတိုင်းမြင်ရပြီ ဆိုရင် Camera ပုံကို နှိပ်ပါ...
Instant ဘာသာပြန်တာကို ပိတ်ပြီးအရင်စမ်းမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် လိမ္မော်ရောင်စက်ဝိုင်းနဲ့ ဝိုင်းပြထားတဲ့ မျက်လုံးပုံ အစိမ်းရောင်ကို တစ်ချက်နှိပ်ပါ...
Instant OFF လို့ ပြသွားပါလိမ့်မယ်... အောက်ဆုံးအတန်းရဲ့ ဘယ်ဘက် icon လေးကတော့ ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ ပုံထဲမှာပါတဲ့ စာသားတွေကို ဘာသာပြန်တဲ့ အချိန် အသုံးနိုင်ပါတယ်... အခုတော့ ကင်မရာနဲ့ ဘာသာပြန်တာကို သုံးမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အလယ်က အနီရောင်နောက်ခံ ကင်မရာပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပါ...
ကိုယ်ဘာသာပြန်ချင်တဲ့ စာသားရှိတဲ့နေရာကို ကင်မရာချိန်ထားပြီး စာသားနဲ့ ကင်မရာ ရေပြင်ညီ ဖြစ်အောင် ချိန်ပြီး (Align text) ကင်မရာပုံကို နှိပ်ပါ...
Use your finger to highlight text လို့ပေါ်လာရင် ကိုယ်ဘာသာပြန်လိုတဲ့ စာသားတွေကို လက်နဲ့ တို့ထိ select ပေးပြီး ဘာသာပြန်နိုင်သလို Select All ကို တို့ထိပြီး ပုံထဲမှာပါသမျှ စာသားတွေကို ဘာသာပြန်နိုင်ပါတယ်...
ဘာသာပြန်ထားတာ preview ပြနေတဲ့ စာရဲ့ ညာဘက်မှာရှိတဲ့ အပြာရောင်မြှားကို တို့ထိလိုက်ပါ...
အခုလိုပေါ်လာပြီဆိုရင် JAPANESE အောက်က ပုံထဲက ဂျပန်စာတွေကို text အဖြစ်နားလည်သွားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် select ပေးပြီး copy ကူးယူလို့ရပါတယ်... အဲဒီလိုပါပဲ ENGLISH အောက်ထဲက ဘာသာပြန်ထားတဲ့ စာတွေကိုလည်း copy ကူးယူပြီ လိုသလို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်...
ထပ်ပြီးတော့ Instant translation ကို စမ်းကြည့်ရအောင်ပါ...
Instant translation လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် မျက်လုံးပုံ အစိမ်းရောင်ကိုနှိပ်ပြီး Instant ON ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ...
ဂျပန်စာသားရှိတဲ့နေရာကို ကင်မရာထောက်လိုက်တာနဲ့ screen ပေါ်မှာ English လို ဘာသာပြန်ပေးတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်...
အခုက Japanese ကနေ English ကို ဘာသာပြန်တဲ့နည်းကို ရေးပြခဲ့တာပါ... Google Translate app သုံးပြီး သူ့ထဲမှာပါတဲ့ ဘာသာစကားတွေ အချင်းချင်း ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်... အခြားဘာသာစကား တစ်ခုခုကနေ Myanmar (Burmese) ကို ဘာသာပြန်ရင်တော့ ထွက်လာတဲ့စာသားတွေကို Unicode နဲ့ဖော်ပြပေးပါတယ်...
Google Translate က Conversation အကြောင်း...